Mada 25m 2020: mpilomano miisa 284 mifaninana | NewsMada
Mada 25m 2020: mpilomano miisa 284 mifaninana
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy, omaly, tao amin’ny dobo filomanosana Saint Gabriel teto Mahajanga. Mpilomano 284 mianadahy avy amin’ny klioba miisa 18 ny mifaninana. Hipoka tanteraka ny dobo filomanosan’ny Saint Gabriel Mahajanga, nandritra ny fanokafana.
Nisy ny filatroana natao isaky ny klioba mandrafitra ny ligim-paritra miisa 7 (Analamanga, Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany, Matsiatra Ambony, Alaotra Mangoro, Atsinanana ary Boeny mampiantrano), nialoha ny fifaninanana. Mitotaly 284 ireo mpilomano mandray anjara avy amin’ireo klioba miisa 18. Raha hiverenana ny fifaninanana, ho an’ny omaly, teo amin’ny 200 m Nage libre ny nanombohana azy. Isan’ny tena be mpandray anjara indrindra ity 200 m ity, teo amin’ny sokajy vehivavy, nahitana “série” 11. Hatreto tsy mbola nisy nahavita nanamontsana ny zava-bita tsara indrindra, saingy andrasana kosa ny hamaroan’izany ho amin’ny anio.
Vokatra anisan’ny tsara hatreto…
Vokatra isan’ny tsara kosa ny vitan-dRabejaona Holy Antsa, teo amin’ny 200 m NL, sokajy vehivavy, nahazo ny laharana voalohany izy teo amin’ny sokajy nisy azy, tamin’ny fe-potoana 2.15 ny nahavitan’ity mpilomano avy niatrika ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika farany teo ity. Isan’ny efa nandray anjara ihany koa i Lalanomena (Cosfa) teo amin’ny 800 NL, sokajy lehilahy, izay nivoaka ho mpandresy mora foana (4.55.57) nanoloana an-dry Aro Toavina (SIA) sy ireo mpilomanon’ny ASSM. Tsiahivina, niisa telo ny “course” vita omaly, nahitana ny teo amin’ny 200 m NL, 400 QN ary ny 800 NL.